isihlabathi ukwenza umshini, isihlabathi okwenza imishini yokukhiqiza, nke isihlabathi ukwenza umshini
Ikhaya » imikhiqizo » isihlabathi ukwenza umshini
umthamo:50-700t / h
usayizi okokufaka Max:40mm-110mm
Ama-Raw material:Nsimbi, ore yethusi, usimende, inhlabathi yokufakelwa, fluorite limestone, slag, njll
Isicelo:Engineering, umgibeli umugqa, amabhuloho, emgwaqweni omkhulu, ujantshi, ubunjiniyela kamasipala.
Sand Making Machine kuyinto ephezulu amandla ongaphakeme-ukusetshenziswa, esiklanyelwe kuncike umsebenzi eminyakeni eminingana 'kanzima nokutadisha mechanical imishini ezimayini. Sand Making Machine ubamba ubuchwepheshe best eziphambili imikhiqizo efanayo isiJalimane, futhi manje isivele ifinyelele level.It ngamazwe linendima ebalulekile ukuchoboza namaminerali kube izicucu. PCL isihlabathi ukwenza umshini is kabanzi zonke izinhlobo amaminerali, carborundum okusanhlamvu, usimende, impahla refractory, ingilazi impahla eluhlaza, isitokwe itshe futhi zonke izinhlobo yokusansimbi slag, ikakhulukazi carborundum, izinto ezifana kukhona ne izici kanzima kakhulu futhi anti-ukugqwala. Futhi Sand Making Machine kuyinto ikhiqize kakhudlwana kunamanye uhlobo Crushers.
Isici-isihlabathi ukwenza umshini:
1. isakhiwo Simple futhi kunciphise nezindleko;
2. Okuningi egqokenayo kanye nokugcinwa kulula;
3. Umsebenzi ukuchotshozwa esihle futhi ukugaya aluhlaza;
4. Kancane kuthonywa umswakama okuqukethwe indaba, futhi okuqukethwe max umswakama cishe 8%;
5. Ngaphezu ofanele kwasani maphakathi no-ubulukhuni kanye ubulukhuni izinto;
6. ukuma Cubic imikhiqizo yokugcina, ukuminyana eliphezulu enqwabelanisa futhi ongaphakeme ukungcola yensimbi;
I impahla eluhlaza engena plc isihlabathi ekwenziweni machine ngokusebenzisa feed hopper futhi ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili by ipuleti impahla-sokuhlukanisa. Omunye ungena impeller unqamula enkabeni ipuleti impahla-sokuhlukanisa, isheshiswe ngokushesha. I ukusheshisa kaningi kunanoma ukusheshisa okudonsa izinto. Khona-ke impahla eluhlaza is waxosha kusukela ngokulinganayo basakaza ukugeleza iziteshi ezintathu ngejubane 70-90m / s. I impahla eluhlaza lokuqala ishayisa impahla falling emgwaqweni futhi ishayisa liner impahla e vortex ingaphakathi ndawonye. I impahla eluhlaza is asimama ngu liner impahla waxosha kuya phezulu ingaphakathi vortex. I ezihambayo izinguquko isiqondiso futhi kuqeda phansi. Indaba okuyinto waxosha kusuka iziteshi ukugeleza yakha impahla liner okuqhubekayo. Ngale ndlela, indaba hit, yaphahlazeka phansi izikhathi kabili noma ngaphezulu vortex ingaphakathi. Indaba ochotshoziwe likhulula kusukela esidayisa ngezansi.
Amapharamitha-isihlabathi Technical ukwenza imishini
isivinini Rotor (r / Mim)